Mmanya ma rie ugbu a dịkwa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Mmanya ma rie ugbu a dịkwa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Hong Kong Wine & iri nri
Hong Kong bụ obodo mmeri na iri nri na otu n'ime ihe omume kachasị ewu ewu na City of Light, na afọ a ọ na-aga mebere.
Hazie site na Tourlọ Ọrụ Njem Nleta Hong Kong (HKTB), "Hong Kong Wine & Dine Ememme" ga-enweta ọ bụghị naanị ụtọ ụtọ kamakwa usoro zuru ụwa ọnụ. Na ememme ahụ, ọ bụ naanị ngwaọrụ pụọ, chee echiche banyere obi ụtọ nke iko mmanya mmanya na mmadụ ọkara gburugburu ụwa ma ọ bụ mụta ụzọ ọhụrụ iji kwadebe nri na-atọ ụtọ site na isi nri - niile site na nkasi obi nke oche kachasị amasị gị.
N'ụwa nke taa, nzute mmadụ maka otu iko mmanya site na mbugharị bụ ihe okike. Beingsmụ mmadụ na-agbanwe agbanwe, na n'eziokwu, ụwa nke mepere emepe na-agbasa mbara igwe anyị nke ukwuu. Site na Hong Kong ruo New York City ruo Monte Carlo ruo Saint Petersburg na South Africa, Hong Kong Wine & Dine Festival ga-agba mbọ ịkọ akụrụngwa anyị na agụụ ụwa anyị ịga njem. N'afọ a, n'ihi na ihe omume ahụ dị n'ịntanetị, ọ ga-ekwe omume izute ndị si n'akụkụ ụwa niile!
N’ịkọwa usoro ebum n’uche a, Onye isi oche HKTB, Dr. YK Pang kwuru, sị: “Ememe Wine & Dine nke Hong Kong bụ otu n’ime ihe omume ndị ama ama n’etiti ndị obodo na ndị njem nleta kemgbe ọ malitere afọ iri gara aga. N'agbanyeghi ntiwapụ COVID-19 n'afọ a, anyị nwere olile anya na ndị mmadụ nwere ike ịga n'ihu na-anụ ụtọ ọdịbendị nri pụrụ iche na Hong Kong ebe ha na-enye ohere azụmaahịa maka mpaghara F & B mpaghara dị n'etiti ọnọdụ akụ na ụba a siri ike. Hazi ememme a ga - enyere anyị aka imezu ebumnobi abụọ ahụ n’emebighị ahụike na nchekwa ọha. ”
Agbanyeghi n ’usoro di iche, emume a ka ga anaputa usoro ihe omuma nke usoro ihe omume dika ihe di egwu, nke gosiputara nri na onunu. Yabụ ọbụlagodi na ibi na Timbuktu, n'afọ a, ị nwere ike isonye na Ememme a na-eme kwa afọ site na ebe ọ bụla ị nọ.
Dr. Pang gbakwụnyere, sị: “Virtual Hong Kong Wine & Dine Festival ga-agba mbọ ịmegharị ọ recreụ joie de vivre nke ihe omume a ma ama site na ịnye ohere ị ga-enwe mmanya na-enweghị atụ na gourmet ahụmahụ ndị ọkachamara lebara anya na ya. N'iji usoro usoro ihe eji eme ihe, a ga-agbatị ihe omume a site na ụbọchị anọ ọ na-emebu ruo ọtụtụ izu ka ọtụtụ mmadụ wee nwee ike isonye n'agbanyeghị oge na oke ala. "
Iji chekwaa ekpomeekpo mbụ nke ahụ nkịtị dị ka o kwere mee, HKTB na-ewu ụlọ ntanetị ebe ọtụtụ mmemme Ememe ga-ewere ọnọdụ. A dịgasị iche iche nke ahịa ahịa ga-enye pụrụ iche ego na ngwaahịa ahaziri maka Ememme nke sonyere nwere ike ịchọgharị na ịzụta a mebere ngosi ohere. Ka ọ dị ugbu a, a ga-akpọ ndị a ma ama mmanya na ndị nkatọ nri, ndị isi nri, na ndị ọkachamara mmanya ka ha kwuo okwu na mmanya na-arụkọ ọrụ ọnụ na usoro nri na usoro mmụta na klaasị.
Emere Hong Kong Wine & Dine Festival na 2009 mgbe Hong Kong na Bordeaux bịanyere aka na Memorandum of Understanding na Nkwado na Ahịa metụtara Wine. Nnukwu ihe omume a na-eme n'èzí ghọrọ ngwa ngwa nke obodo ahụ ma bụrụ nke a kpọrọ aha otu n'ime mmemme iri na elu ụwa na mmanya nke Forbes Traveler.
Atesbọchị na nkọwa nke Hong Kong Wine & Dine Festival ga-abịa site na Kọmitii Njem Nleta Hong Kong.
Rie nke ọma!